Ịdebe WordPress weebụsaịtị - Ihe Ntuziaka Site na Ọkụ
Ọtụtụ e-azụmahịa weebụsaịtị na-melite na WordPress. Ndị dị iche iche na-eche na mmetụta nkeemebi dị iche iche hacks nke nwere ike ịbịa na dị iche iche WordPress weebụsaịtị. N'ikwu eziokwu, internet juputara na ndị mmadụ niileụdị obi ọjọọ. Site spamming ka spoofing, o doro anya na hackers nwere ike mgbe ahụ lekwasịrị gị na ebe nrụọrụ weebụ ma gbuo ụfọdụ n'ime ha ọjọọeme atụmatụ. Ọtụtụ ndị na-agba ọsọ na-eme ka hà bụ ndị nwere mmasị na nkwalite SEO gị ma ọ bụ mgbasa ozi ọzọ ị na-agba ọsọ.Kama nke ahụ, ha kwụsịrị ime ụfọdụ n'ime hacks - mikrotik hack.
Hacks nwere ike ịgụnye cross site scripting (XSS), phishing, izu ohiozi yana ịnyefe nnwere onwe. Ọtụtụ ndị ewereela ozi igwe ka ọtụtụ nde ndị ahịa na-aga ma rụọna-enyefe n'azụ azụ ha. N'ọnọdụ ndị ọzọ, ha nwere ike ịmepụta ebe nrụọrụ weebụ na-ekele ndị mmadụ na ihe dị egwu na akaụntụ onye ọrụ ha.N'ihi ya, nchekwa gị na ebe nrụọrụ weebụ WordPress yana nke ndị ahịa gị na-adabere n'otú ị si nọrọ na ncheedebe ndị a hackers.
Artem Abgarian, onye isi ahịa ndị na-azụ ahịa nke Ọkachamara Digital Services, na-enye ụfọdụ n'ime usoro aghụghọ-mbanye, nke nwere ike chebe gị website megide hackers:
1. Jiri akwukwo nbanye.
The WordPress nbanye peeji nke bụ na-emekarị adịghị nnọọ nchebe. Maka aonye nwere ike ịnyacha, ọ ga-ekwe omume iji obi ọjọọ tinye ụzọ n'ime nchekwa data nke ebe nrụọrụ weebụ si na ibe nbanye ahụ. Mgbe ị na-eme gịWordPress saịtị, ọ dị mkpa ịtụle na-agbakwụnye / wp-nbanye..php ma ọ bụ / wp-admin / n'elu ngalaba weebụ ị na-echekwa. Nke a nwere ikegbochie ụdị ntinye a yana mwakpo ọnụ ala ndị ọzọ. Iji okwuntughe ozo enwere ike inye aka n'oru nchịkwa nke ulo gi di elunche. N'ihi ya, zere ezigide okwu dịka 12345 ma ọ bụ paswọọdụ dị mfe ịkọ.
2. Zoo data site na iji SSL.
Ogwe nche a na-ejide n'aka na mgbanwe nkedata n'etiti ihe nchọgharị na ihe nkesa na-echekwa. N'ihi ya, onye na-egwu ihe nwere ike ịnwe oge ọ na-ewelata ozi dị na nchekwa data.Kama inwe aha na nọmba, hacker nwere koodu.
3. Kwado nyocha 2-ihe.
Otu n'ime ụzọ iji hụ na nchekwa gịNdị ahịa dị site na 2fa. Ụfọdụ n'ime ndị na-agba ọsọ na-aga nke ọma na-ejedebe site na ị nweta okwuntughe nye ọtụtụ akụkọ. Otú ọ dị, ihe ntinye nke abụọtinye nchekwa nchekwa ọzọ na nha. N'ihi ya, paswọọdụ n'onwe ya ezughị ezu. Onye ọrụ site na koodu ga-adịsite na ozi ederede ekwentị mkpanaaka, nke nwere ike ọ gaghị abụ ihe ọmụma nke onye nchịkọta ihe.
Ndị na-agba ọsọ na-abụ ihe ndabere nke ọtụtụ n'ime mpụ cyber ndị na-eche ihu ọha anyị taa. Kwaarụmọrụ n'ịntanetị bụ n'okpuru usoro mbanye ma ọ bụ ọrụ ojoro. Ọ dị mkpa maka mmemme kọnetị iji jide n'aka na ụzọ nkenchebe megide ndị na - egwu egwu kwesịrị ịnọ na nche ma hụ na ha na - anọghị ná nchebe ndị a. Nche nke e-azụmahịa gịweebụsaịtị dị n'aka gị. Ntuziaka a na-enye ụfọdụ ụzọ nchịkọta mbanye anataghị ikike, nke nwere ike iwuli nchebe nke saịtị gị. N'ọnọdụ ụfọdụ,echebe gị website megide hackers nwere ike hụ na gị Search engine njikarịcha (SEO) mgbalị na-amị mkpụrụ dị ka Google agaghị akarasaịtị gị dị ka nchekwa.